Izindaba - I-Oil Free 4-Stage Oxygen Compressor
Inkampani yethu ingumhlinzeki oholayo wezixazululo zesistimu ye-compressor yegesi engenawo uwoyela e-China, kanye nebhizinisi elichwepheshile lobuchwepheshe obuphezulu elithuthukisa futhi likhiqize ama-compressor angenawo uwoyela.Le nkampani inohlelo oluphelele lwesevisi yokumaketha kanye namakhono aqinile ocwaningo nentuthuko eqhubekayo.Imikhiqizo imboza konke ukuthambisa okungenawo uwoyela.Ama-Air compressors, ama-oxygen compressors, ama-nitrogen compressors, i-hydrogen compressors, i-carbon dioxide compressors, i-helium compressors, i-argon compressors, i-sulfur hexafluoride compressors kanye nezinhlobo ezingaphezu kuka-30 zama-compressor amakhemikhali egesi, ingcindezi ephezulu ingafinyelela ku-35Mpa, imikhiqizo isetshenziswa kabanzi kumakhemikhali e-petrochemicals, izindwangu. , ukudla, imithi, amandla kagesi, imishini, insimbi, izinto zikagesi zasendlini, ukuvikelwa kwemvelo kanye neminye imikhakha eminingi.Njengamanje, ama-compressor amaningi angenawoyela wohlobo lomoya akhiqizwe yinkampani yethu, futhi athunyelwe eYurophu, eMelika, eJapan, eNingizimu Korea, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, emazweni angaphezu kuka-40 nasezifundeni zaseMpumalanga Ephakathi nase-Afrika, futhi imikhiqizo yethu iye yathunyelwa. wazuza udumo olubanzi kumakhasimende amaningi, futhi wasungula idumela elihle lekhwalithi ezinhliziyweni zabasebenzisi.
I-compressor ye-oxygen ibhekisela ku-compressor esetshenziselwa ukucindezela umoya-mpilo futhi ibone ukuhamba noma ukugcinwa.
Kunezinhlobo ezimbili zama-oxygen compressor ezokwelapha asetshenziswa kakhulu.Esinye siwukuthi ijeneretha komoya-mpilo ye-PSA esibhedlela idinga ukucindezelwa ukuze inikeze amawodi ahlukahlukene namakamelo okuhlinzela.Inikeza ingcindezi yepayipi ye-7-10 kg.I-oxygen evela ku-PSA idinga ukugcinwa esitsheni esinomfutho ophezulu ukuze isetshenziswe kalula.Ingcindezi yokugcina imvamisa ingu-100 barg, 150 barg, 200 barg noma 300 barg pressure.
Izicelo zezimboni zama-oxygen compressor zihlanganisa ukucindezela komoya-mpilo ophansi we-VSA izicelo ezigayweni zensimbi, izigayo zephepha nezimboni zokuhlanza amanzi.
Ukucindezelwa kokugcwalisa ibhodlela le-oxygen okungenawoyela kuhlukaniswe ngezindlela ezimbili zokupholisa, ukupholisa umoya kanye nokupholisa amanzi.Isakhiwo esime mpo.Uchungechunge lwenkampani yethu lwe-high-pressure lubricated oxygen compressors lunokusebenza okuhle kakhulu, ukusebenza okuzinzile, ukusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla, impilo ende yesevisi, futhi asetshenziswa kabanzi.Ngomoya-mpilo, ubuchwepheshe bamakhemikhali kanye nokunikezwa kwe-oksijeni ephezulu, kanye nejeneretha ye-oksijini, kwakheka uhlelo lwe-oksijini olunomfutho ophezulu olula futhi oluphephile.
Kuma-compressor we-oksijini angenawo uwoyela, ama-friction seal afana namasongo e-piston namasongo omhlahlandlela enziwe ngezinto ezikhethekile ezinezakhiwo zokuzigcoba.
Izinzuzo zesakhiwo zibonakala ku:
1. Lonke uhlelo lokucindezela alukho ukugcoba kwamafutha amancane, okugwema ukuthi kungenzeka ukuthi amafutha athintane ne-high-pressure kanye ne-high-purity oxygen futhi aqinisekise ukuphepha komshini;
2. Lonke uhlelo alunayo i-lubrication kanye nesistimu yokusabalalisa uwoyela, isakhiwo somshini silula, ukulawula kulula, nokusebenza kulula;
3. Lonke uhlelo alunawo uwoyela, ngakho umoya-mpilo ocindezelwe ophakathi nendawo awungcolisi, futhi ukuhlanzeka komoyampilo endaweni yokungena nokuphuma kwe-compressor kuyafana.
I-cylinder yegesi egcwalisa i-oxygen compressor ifanele i-inlet pressure 3-4barg (40-60psig) kanye ne-exhaust pressure 150barg (2150psig)
I-15NM3-60NM3/ihora elincane le-PSA yokukhiqiza umoya-mpilo uhlelo luhlinzeka ngezinsizakalo zokugcwalisa umoya-mpilo ohlanzekile wokuhlinzekwa komoyampilo emiphakathini nezibhedlela ezincane eziqhingini, kanye nokusika umoya-mpilo wezimboni.Ingasebenza ngokuqhubekayo amahora angama-24, futhi ingafinyelela amabhodlela angaphezu kuka-20 isikhathi ngasinye.
Izici zale compressor
Ukucindezela kwezigaba ezine kuyamukelwa.Imodeli epholiswe ngamanzi isebenzisa isipholile samanzi sensimbi engagqwali ukuze kuqinisekiswe umphumela omuhle wokupholisa we-compressor futhi inwebe ngempumelelo impilo yesevisi yezingxenye zokugqoka eziyinhloko.Imbobo yokungenisa ifakwe ingcindezi encane yokungena, futhi indawo yokukhipha ifakwe idivayisi yokukhipha umoya.Izinga ngalinye lokuvikelwa kwengcindezi ephezulu, ukuvikelwa kokushisa okuphezulu kokukhipha amandla, i-valve yokuphepha nokubonisa izinga lokushisa.Uma izinga lokushisa liphezulu kakhulu futhi licindezela ngokweqile, isistimu izothuka futhi ime ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuphephile.Kukhona i-forklift phansi kwe-compressor, engadluliselwa kalula kusayithi.
I-compressor yethu ye-oxygen esezingeni eliphakeme isiphumelele isitifiketi se-EU CE futhi ihlangabezana nezidingo zemakethe ye-EU.
Futhi singahlinzeka ngama-compressor oksijini enziwe ngokwezifiso ngokuya ngezimo zamakhasimende.
I-oxygen compressor yethu inezici ezilandelayo
1. Ngokuphelele 100% engenawo uwoyela, awekho amafutha adingekayo, isilinda sensimbi engagqwali
2. Ifanele i-VPSA PSA oxygen source pressure
3. Akukho ukungcola, gcina ukuhlanzeka kwegesi kungashintshiwe
4. Ikhwalithi iphephile futhi inokwethenjelwa, inozinzo oluhle, iqhathaniswa futhi ithatha indawo yemikhiqizo efanayo yangaphandle.
5. Izindleko zokuthenga eziphansi, izindleko eziphansi zokunakekela kanye nokusebenza okulula.
6. Impilo yesevisi yendandatho ye-piston ngaphansi kwesimo esiphansi sokucindezela amahora angu-4000, futhi impilo yesevisi ye-piston ring ngaphansi kwesimo sokucindezela okukhulu amahora angu-1500-200.
7. I-Brand motor, ungacacisa uhlobo, njenge-Siemens noma i-ABB brand
8. Nikeza imakethe yaseJapan ukuze ihlangabezane nezidingo zekhwalithi ezifunwa yiJapan
9. Ngokusho kwezimo ezithile zokusebenza zekhasimende, i-compressor iklanyelwe ukucindezelwa kwesiteji esisodwa, ukucindezelwa kwezinyathelo ezimbili, ukucindezela kwezinyathelo ezintathu kanye nokucindezela kwezinyathelo ezine.
10. Ijubane eliphansi, impilo ende, isivinini esimaphakathi 260-400RPM,
11. Umsindo ophansi, umsindo omaphakathi ungaphansi kuka-75dB, ungasebenza buthule emkhakheni wezokwelapha
12. Ukusebenza okuqhubekayo okuqhubekayo komsebenzi osindayo, ukusebenza okuzinzile amahora angama-24 ngaphandle kokuvala shaqa (kuye ngemodeli ethile)